Shaakir oo war cusub kasoo saaray Guriceel, sheegayna arrin uu diyaar u yahay + Video | Dalkaan.com
Home Warkii Shaakir oo war cusub kasoo saaray Guriceel, sheegayna arrin uu diyaar u...
Guriceel (dalkaan) – Hoggaamiyaha Ururka Ahlu-Sunna Sheekh Maxamed Shaakir ayaa faah-faahin ka bixiyay xaaladda magaalada Guriceel oo ay gacanta ku hayeen 20-kii maalmood ee lasoo dhaafay, wuxuuna diginin culus u jeediyey ciidamada dowladda iyo Galmudug.
Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in ciidanka dowladda Soomaaliya ay duulaan kusoo yihiin magaalada Guriceel, islamarkaana taasi ay sababtay in dhammaan dadkii kunool magaalada ay barakaceen.
Waxaa uu sheegay in ay diyaar u yihiin wada-hadal, islamarkaana aysan jirin wax dagaal ah oo uu dhankiisa wado.
Waxaa uu tilmaamay in ay soo dhaweynayaan baaqyada ka imaanaya laamaha kala duwan bulshada iyo qaar ka mid ah beesha caalamka.
Ciidanka dowladda Soomaliya ayuu ugu digay in ay ka qeyb ka noqdaan dagaalka magaalada Guriceel.
“Annagu cidna duullaan kuma nihin, ujeedkeenu waa Al-Shabaab. Waxaan leenahay ciidamada dowladda federaalka ha iska ilaaliyaan inay dagaal kusoo qaadaan magaaladaan Guriceel. Waxaan ka digeynaa iyagoo dan gaara fulinaya inay weerar kusoo qaadaan Guriceel,” ayuu yiri Sheekh Shaakir oo ciidamada dowlada ugu baaqay inaan loo adeegsan dagaal.
“Uma maleyneynin in shacabka Guriceel laga aarsanayo inay soo dhoweeyeen culimadooda.. Ciddii xabbad wado waa in la ogaado oo la joojiyo..” ayuu sheekh Shaakir inay wax lala yaabo ku tilmaamay in dagaal lagu soo qaado oo Alshabaab ay uga darnaadaan maamulka Galmudug.
Wuxuu ku baaqay in loo gargaaro dadka ka barakacay magaalada Guriceel ee u baahan taageerada, kuna tabaaleysan duleedka magaalada.
Previous articleSoulmate Reading Reviews
Next articleWararka Suuqa Caawa: Paul Pogba oo Hakiyay Wadahadalada Man United, Go’anka Marco Asensio Iyo Qodobo kale
Go’aano culus oo lagu soo rogay shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Somaliland
Wararka Suuqa Maanta: Haaland, Tarkowski, Pogba, Lacazette, Vlahovic, Fekir, Mayoral
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha maanta oo aad maalin walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com Manchester United ayaa aaminsan imaanshaha Ralf Rangnick ee...
Maxay tahay ballanta ay madax goboleedyada ka qaadeen Rooble ee caawa...
Chelsea oo qorsheeneysa heshiis isku badalasho oo ku aadan Frenkie de...
Puntland oo qaaday tallaabo ka dhan ah guddoomiyaha guddiga doorashada dalka
Xog: Khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka Guriceel iyo halka caawa...